Izixhobo zombane zombane | I-China i-Electric Power fittings abavelisi kunye nabaxhasi
I-LP uthotho lokugqobhoza izihlanganisi
Uluhlu oluSebenzayo loMqhubi
Icandelo loMgca oPhambili (mm ')
Icandelo leLayini yeSebe (mm ')
I-LPEP JJC-2 16-95 1.5-10
I-52 × 68 × 100
I-83 × 130 × 130
LP300 I-LP9 95-300 95-240
LP400 I-LP9 120-400 95-240
绝缘 穿刺 线夹 概述 ／Isinxibelelanisi sokugqobhoza ngokubanzi
Isinxibelelanisi sokubhoboza, ufakelo olulula, akufuneki ukhulule idyasi yekhebula;
Umzuzu wenut, uxinzelelo lokugqobhoza luhlala luhleli, gcina uqhagamshelo lombane kwaye ungenzi monakalo ekukhokeleni;
Isakhelo sokuzimela, kumanziubungqina, Ukunqaba okungangeni manzi, ukwandisa ubomi besikhokelo esikhuselweyo kunye nesinxibelelanisi;
Ukwamkelwa kwecwecwe lokudibanisa elikhethekileyo lisebenza ngokudibeneyo kweCu (Al) kunye neAl;
Ukuxhathisa ngombane okuncinci, ukunyanzeliswa okwangoku kunokuba ukuya kwi-15KA;
Ityala elikhethekileyo lokukhutshwa komzimba, ukumelana nokukhanya kunye nokuguga kwendalo, amandla okusonga anokufikelela kwi-6KV.
Uyilo lomphezulu weArc, faka uqhagamshelo kunye nobubanzi obufanayo (obahlukileyo), ububanzi bendawo yonxibelelwano (l.5-240m㎡).
产品 性能 实验 ／Uvavanyo lomsebenzi
Ukusebenza koomatshini: amandla egriyali yocingo lwe-1/10 inkulu kunamandla okuphula ekhokelela. lt ukuthobela GB2314-1997;
Ukusebenza kobushushu: Ngaphantsi kwemeko enkulu yangoku, ukunyuka kobushushu kwesinxibelelanisi kuncinci kunonxibelelwano lwentambo;
Ukusebenza kwesangqa sobushushu: amaxesha angama-200 ngomzuzwana, 100A / m㎡ enkulu yangoku, umthwalo omninzi, utshintsho koxinzelelo lwenethiwekhi lungaphantsi kwe-5%;
Ukusebenza kokufakwa kwamanzi okumanzi: phantsi kwemeko ye-S02 kunye nenkungu yetyuwa, inokwenza amaxesha amathathu eentsuku ezilishumi elinesine kuvavanyo lwesangqa;
Ukusebenza kokuguga kokusingqongileyo: phantsi kwemeko ye-ultraviolet. Imitha, eyomileyo neyomileyo, ukuyiveza ngotshintsho lobushushu kunye nefuthe lobushushu ezintandathu iiveki.
要 选择 绝缘 穿刺 （（IPC) / Isizathu sokudubula isixhobo sokugqobhoza isixhobo sokudibanisa (IPC)
l Ukufakwa ngokulula
Ngaba isebe lekhebula ngaphandle kokuhluba idyasi efakiweyo kwaye indibaniselwano igqunyiwe ngokupheleleyo, Yenza ibrance kwindawo engacwangciswanga yekhebula ngaphandle kokucima
intambo ephambili Ufakelo olulula noluthembekileyo, kufuneka nje i-sleeve spanner, unokufakwa nayo kumgca ophilayo;
l Ukusetyenziswa okukhuselekileyo
Idibeneyo inokuchasana kakuhle nokugqwetha, inyikima yomlilo emanzi, umhlwa we-electrochemical kunye nokuguga, akufuneki kulondolozo, Isetyenziswe ngempumelelo kangangeminyaka engama-30;
l Iindleko zoqoqosho
Indawo encinci yofakelo yonga iindleko zebhulorho kunye nolwakhiwo lomhlaba Kwisicelo sesakhiwo, akukho mfuneko yebhokisi ye-therminal boxjunction kunye nokubuyisa ucingo lwentambo
yonga iindleko zekhebula, Ixabiso leentambo kunye ne-clamp lisezantsi kunenye inkqubo yokuhambisa umbane.
Isinxibelelanisi sokugqobhoza i-PC-150
Izihlanganisi zokugqobhoza iJBD ziyasebenza kwintambo zombane eziphantsi. Ezi zihlanganisi zisetyenziselwa ukuseka uqhagamshelo lwe-T kunye nonxibelelwano oluDibeneyo. Ukuqhagamshela komgca ophambili kusekwe ngokugqobhoza ngaphandle kokuhlutha ubushushu. Umdibaniso womgca wempompo usekwe ngokufaka itephu yomqhubi kwibhola emva kokuhluba ubushushu. I-Shear head bolts isetyenziselwa unxibelelwano zombini.
Isinxibelelanisi sokugqobhoza i-DP10
Inkcazo: Izihlanganisi ezigqobayo zokugquma zisebenza kuzo zonke iintlobo zabaqhubi be-LV-ABC kunye nokunxibelelana nenkqubo yenkonzo, ukwakha inkqubo yombane kunye nenkqubo yokukhanyisa ezitalatweni. Izihlanganisi zokugqobhoza i-insulation zingenziwa ngokulula ngokuqinisa iibholiti ukunyanzela amazinyo ukuba angene ekugqobeni komgca ophambili kwaye ucofe umgca ngaxeshanye. Ukuhlanjwa kwe-insulation kuthintelwe kuyo yomibini imigca.
Isinxibelelanisi sokugqobhoza i-CPA
● Umgca ophambili: Intambo yealuminium egqunyiweyo
● Cofa umgca: Intambo yealuminium egqunyiweyo okanye intambo yobhedu egqunyiweyo
● Umzimba ubunjwe kwizinto ezinzima kunye nemeko yemozulu
● I-shear head bolt eyenzelwe ngokukodwa ivumela ukufakwa okusebenzayo phantsi kwe-torque elawulwayo eqinisekisa ukuba amazinyo oqhagamshelo angena ngokufanelekileyo kumqhubi ngaphandle kokonakalisa amandla oomqhubi